Sakafo mahazatra an'i Frantsa | Vaovao momba ny dia
Maria | | Frantsa, gastronomy
Ny sakafo frantsay dia mitovy dika amin'ny kalitao sy fanatsarana. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo gastronomies manan-danja indrindra eto an-tany. Ny akora fototra ampiasaina ao anaty vilia dia ny dibera, fromazy, anana, voatabia, hena ary legioma amin'ny ankapobeny.
Raha manontany tena ianao hoe inona ny sakafo mahazatra any Frantsa, ireto misy fomba fahandro malaza indrindra avy any amin'ny tany Gallic izay mahalasa adala ny olona. foodies manerana izao tontolo izao.
4 Lasopy tongolo
7 Baguettes sy fromazy
Io no lovia kintana amin'ny fankalazana rehetra any Frantsa satria tsotra be ny manomana ary na mafana na mangatsiaka dia mitovy matsiro ihany koa. La Quiche Lorreine Sakafo mahazatra avy any Frantsa izy io, manokana avy any Lorraine, ary azo omanina amina akora maro, na dia ny tsikombakomba aza mofomamy mofomamy kely mamy dia namono bacon sy fromazy Gruyère.
El coq au vin Izy io, azo inoana, no lovia malaza indrindra amin'ny nahandro Occitan, izay nanjary tanindrazana ho sakafo mahazatra an'i Frantsa manerana ny firenena, na dia misy nuansa aza. Ohatra, amin'ny hena gana saosy na gisa no ampiasaina, raha any avaratr'i Occitania kosa dia misy hena hafa toy ny henan'omby.
Ho an'ny fanomanana ny saosy matsiro dia ilaina ny manampy divay mena, na dia misy aza ny divay fotsy sasany dia divay fotsy no ampiasaina. Ho fanampin'izany, mba hanatsarana ny tsiro dia mety ny manampy legioma sasany toy ny tongolo na turnip ary na amin'ny faritra sasany aza dia ampiasaina holatra.
Iray amin'ireo lovia malaza amin'ny sakafo frantsay mahazatra. Ity fomba fahandro ity dia vita amin'ny legioma voaendy izay matetika manitra miaraka amin'ny ahitra sy zava-manitra Provencal. Ity henan-tsakafo ity dia avy amin'ny Provence dia mitovy amin'ny pisto Manchego, saingy ny fanafoanana azy no farany. Izy io dia azo aroso ho toy ny fampianarana voalohany na ho haingon-trano ho an'ny hena sy trondro.
Misaotra ny sarimihetsika Disney ny Ratatouille nanjary nalaza nanerana an'izao tontolo izao. Nanomboka tamin'ny lovia frantsay isam-paritra ka naseho tamina boky mahandro sakafo iraisam-pirenena an-jatony.
Ity dia iray amin'ireo lovia tsara indrindra amin'ny nahandro frantsay na dia lovia mahazatra iraisan'ny fianakaviana manetry tena aza izy io tamin'ny voalohany. Ny tsiambaratelon'ity sakafo frantsay mahazatra ity dia ny filalaon'ny tsiro eo amin'ny hamamin'ny tongolo afangaro amin'ny ron-kena vita amin'ny trano sy ny fromazy gratin.
Ny tongolo dia masaka amin'ny dibera sy menaka miadana ary aroso ao anaty lovia, ampio tapa-mofo misy fromazy sy graty. Tsy hay tohaina tsotra izao!
Ity sakafo mahazatra frantsay ity dia fomba iray hitondrana ny votoatin'ny firenena eo amin'ny latabatrao, ka izay no antony isehoany hatrany amin'ny menus an'ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana frantsay. Fomban-drazana iray izay manana toetra tsara ihany koa ho an'ny fahasalamana satria voaporofo fa ny fihinana isan'andro dia manohana ny fiainana ara-nofo ary mampiato ny fahanteran'ny sela hoditra.
Escargot midika hoe sifotra amin'ny teny frantsay ary voaomana amin'ny persily, tongolo lay ary dibera voaendy izy ireo. Na izany aza, azon'izy ireo atao ihany koa ny manala kely azy amin'ny tongolo lay sy tongolo, ary afangaro amin'ny salady.
El Boeuf Bourguignon na ny omby Burgundianina dia sakafo mahazatra any Frantsa, izay avy amin'ny faritra Burgundy. Izy io dia masaka henan'omby matsiro izay nandrahoina ny hena niaraka tamin'ny divay mena Burgundy amin'ny hafanana ambany mba hanalefahana azy ary ampio karaoty, tongolo, tongolo lay ary zava-manitra antsoina hoe garni fehezam-boninkazo.
Rehefa masaka daholo ireo akora voalaza etsy ambony, dia matetika ny saosy no matevina kely amin'ny dibera sy lafarinina. Misaotra an'io fa tratra izany tsy fitoviana mampiavaka azy izany.
Baguettes sy fromazy
Una baguette Voadoboka tsara, sakafo kely frantsay izay, ampiarahina amin'ny fromazy, dia mitondra antsika mankany amin'ny paradisa. Amin'ny latabatra frantsay dia afaka mahita karazana fromazy mihoatra ny 300 ianao nefa ireto no tsy azonao adino:
Le Comté, mamy amin'ny tsiro
Le Camembert, fofona mahery sy tandindon'i Normandy
Le Reblochon, malefaka be sy matsiro
Le Roquefort, iray amin'ireo fromazy manga malaza indrindra eto an-tany
Le Chévre, ronono osy tonga lafatra amin'ny salady
Le Bleu, fromazy manga hafa
Le Brie, matsiro
Iray amin'ireo lovia fandrahoan-tsakafo iraisam-pirenena ankafizin'ny ankizy sy ny olon-dehibe. ny pancakes Izy ireo dia vita amin'ny koba vita amin'ny lafarinina varimbazaha, izay miendrika kapila misy savaivony manodidina ny 16 mm. Na dia nohanina matetika aza izy ireo ho toy ny tsindrin-tsakafo aparitaka amin'ny fondue sôkôla, crème na saosy mamy hafa, dia azo hanina miaraka amina masira masira koa izy ireo.
Ity dia iray amin'ireo tsindrin-tsakafo ankasitrahana indrindra any Frantsa. Mampiavaka azy izany satria ny fizotran'ny famokarana dia atao mifanohitra, izany hoe apetraka amin'ny fotony ny paoma avy eo ampiana ny koba. Rehefa apetraka eo ambony lovia hotompoina dia avadika. Ny tsiambaratelon'ity mofomamy ity dia tsy amin'ny fikarakarana azy ihany fa amin'ireo sombin-paoma sisa tavela ho karamel amin'ny dibera sy siramamy.
Ny tsindrin-tsakafo lamaody iraisam-pirenena. Ny macaron dia mofomamy miendrika bisikileta boribory, crispy ety ivelany ary malefaka ao anatiny, vita amin'ny paty amandy voatavo, siramamy ary fotsy atody. Matetika izy roa dia atolotra roa amin'ny fampiasana paty antsoina hoe ganache amin'ny tsiro samihafa: lavanila, kafe, sôkôla, pistachios, hazelnut, frezy, voasarimakirana, kanelina ...
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, na dia heverina aza fa ny macarons dia avy any Frantsa, misy ireo izay mihevitra fa ny recette dia avy any Venise any Italia., mandritra ny vanim-potoana Renaissance ary io anarana io dia avy amin'ilay teny macrherone izay midika hoe mametaka tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Frantsa » Sakafo mahazatra any Frantsa
Toerana tsara indrindra hahitana ny lanitra feno kintana any Espana
Nazaré, ny firavaka any Portugal